Ziziphi iintlobo zeenkqubo zezinto eziphilayo ezivuselela i-vitamin C?
Ngokuqinisekileyo wonke umntu uyazi i-vitamin C! Sonke sivile ngeyona nto eninzi, asiyikuphikisana nenkxaso yayo kwimizimba ngexesha lokugula, siyithatha rhoqo ngeefilisi okanye iipilisi ezicwangcisiweyo. Kodwa ngaba siyayazi into yonke malunga nale "vithamini" ethandwa "? Kuye kwenzeka ukuba unemfihlelo kunye nemigodi. Kwaye kukho nezinye izinto eziyimfuneko, esingazange sicinge ngazo. Yiyo malunga naluphi uhlobo lwenkqubo yezinto eziphilayo ezinokwenziwa kwe-vitamin C emzimbeni wethu, kwaye uthethe.
I-Vitamin C okanye i-ascorbic acid yenza imisebenzi ebalulekileyo emzimbeni womntu. Inceda kakhulu ukutyunjwa kwentsimbi, ithatha inxaxheba ekwakheni amathambo, amazinyo kunye nezicubu. Idlala indima ebalulekileyo ekuphiliseni isilonda, isekela ukunyaniseka kwesikhumba, kuyimfuneko yokulwa noxinzelelo, ivuselela ukuveliswa kwamahomoni amaninzi, ukwandisa ukuchasana nezifo, inceda uxinzelelo oluphezulu lwe-arterium, atherosclerosis kunye nomhlaza.
Kubalulekile ukwazi ukuba nguyena kuphela i-vithamini engenakubunjwa emzimbeni womntu ngokuzimeleyo kwaye ngoko ke kufuneka ukuba ungeniswe khona ngokutya okanye izongezelo ezikhethekileyo ngendlela yamacwecwe. Kokutya okunothambile kwi-vitamin C, inkokeli epheleleyo i-rosehip - 1 250 mg. kwi-100 g, kunye neziqhamo zeeritrus ziqukethe kuphela 50 mg. 100 g yeziqhamo.
Enye imithombo emihle yale vithamini ebalulekileyo yile: i-pepper, i-strawberries, iitapile, i-cauliflower kunye nezinye izityalo kunye nemifuno eninzi. Kubalulekile ukwazi ukuba ukuhlanganiswa kwe-vitamin C kwiziqhamo kunye nemifuno kwenzeka kuphela xa kusetshenziswe kwifom eluhlaza. Uninzi lwamavithamini luye lwaphuka ngexesha lokunyanga kwentsholongwane kwaye ngexesha lokuqhwala ngethuba lokugcinwa kwexesha elide.
Amanqanaba anconywayo wevithamini C
Umthamo omdala ophakanyisiweyo ngowama-60 mg. ngosuku. Nangona lonke uphando, i-"right" doseji yale vivamisi isengqinelana neengxabano ezininzi kuze kube namhlanje. Kukho izinto ezininzi ezandisa ukwanda kwe-vitamin C. Iimzekelo zibandakanya umkhuhlane ophezulu okanye ubanda, ukutshaya, ukuthatha i-contraceptive kunye namanye amayeza, ukuqhuba ngamandla emzimbeni emsebenzini okanye kwimidlalo. Uninzi lweengcali zezempilo linika amanyathelo aphezulu kunyango lomhlaza okanye izifo zentliziyo. Iimbaleki zengcali zicetyiswa ukuba zithathele kwi-2 ukuya kwi-3 amagremu we-vitamin C ngosuku, njengoko iinkqubo zabo ze-biochemical zikhawuleza kwaye zidinga amandla kunye namandla.
Impembelelo yevithamini C emzimbeni
Sonke siyazi igalelo eliphambili le vivithamini ekumanyeni komzimba. Okokuqala, kwandisa umsebenzi weeseli ezimhlophe zegazi, ezenza imisebenzi, ukuchonga nokutshabalalisa iindiza, ibhaktheriya kunye namaseli omhlaza. Iiseli zegazi ezimhlophe zabantu abathabatha amavithamini kwi-2 ukuya kwi-3 amagremu ngosuku zibonakaliswa ngumsebenzi omkhulu. Abantu abanjalo abanako ukugula baze bahlawule ngokukhawuleza emva kokulimala okanye emva kokuhlinzwa.
I-Vitamin C yi-oxyidizer ebalulekileyo. Ngokwenxalenye yayo, iyakwandisa isenzo sezinye i-antioxidants, kunye nesenzo se-vitamin E. Kungatsholwa ukuba ezi zivithamini ezimbini zibaluleke kakhulu komnye nomnye, kuba ngamnye kubo unamandla okuqinisa nokuxhasa isenzo somnye.
I-Vitamin C ineyona indima ebalulekileyo kwingqondo. Iingcali zithi zikhusela iiseli zengqondo ukusuka kwindlala yomoya. Emva kokuthatha kwiindawo eziphezulu ze-vitamin C emzimbeni womntu, iiseli ezikhethekileyo zifunyenwe kwiisishu zamanzi, ukuhambisa ukuhamba kwegazi kunye ne-oksijini kwingqondo kunye nezinye izitho. Kwiminyaka emininzi edlulileyo, kwenziwa iimvavanyo ezibonisa ukuba i-vitamin C ne-selenium inokuthintela ukuphuhliswa kweeseli zomhlaza. Ngokukodwa, i-vitamin C ngokwayo ithintela ukuguqulwa kwezinto ezithile kwiindawo ezingekho embi. Enye yezinto ezinobungozi yi-nitrites. Bangena emzimbeni wethu kunye nemifuno kunye neziqhamo ezikhulile kunye ne-nitrogen fertilizer equkethe i nitrates, ehamba emzimbeni ibe yi-nitrites - inamandla kakhulu igxininisa. Kuza kubekho, akukho ndlela yokuphepha ukufumana i-nitrate emzimbeni wethu okanye ubuncinane ukwenza oku kuncinci. Xa utshisiwe, ezi zinto ziyingxaki yezifo zesisu nesisu. Kodwa unokuqala iinkqubo zomzimba, apho umphumo wezinto eziyingozi ziza kuhla. Kuye kwabonakaliswa ukuba kuzo zonke iinkqubo ze-biochemical, ukusetyenziswa kwe-vitamin c yimizuzu ebalulekileyo. Nguye okwazi ukumisa ukuguqulwa kwe-nitrate kunye ne-nitrites kwi-nitrosamines, i-compounds edala umhlaza.
Kubaqeqeshi kwintsimi ye-fitness, i-vitamin C ibalulekile ukuze kugcinwe izicubu zesithambo ezifanelekileyo. Ngaphandle kwe-vitamin C akunakwenzeka ukuvelisa i-collagen, iprotheni, ebalulekileyo ekwakheni izicubu ezinxibelelwano. Ukufumana amanyathelo afanelekileyo e-vitamin C kukukhuthaza ukuphulukiswa ngokukhawuleza kwamanxeba nokugcina umzimba unesimo esihle. Ukongezelela, i-vitamin C ibandakanyeka ekuthatyeni i-calcium, eyenza kucacile ukuba ikhuthaza ukubunjwa kwamathambo, ukukhula kwayo, kwaye inika nokuphulukiswa ngokufanelekileyo ngexesha elifanelekileyo.
Sonke sivile kwaye siyazi ukubaluleka kovithamini C kwinkqubo ye-cardiovascular system. Kodwa kufuneka ukwazi ngezibonelelo zamavithamini entliziyweni nasemifuleni yegazi. Kwiingcaphephe zeengcali ezihlola ukuhlaselwa kwentliziyo, kwaqaphela ukuba i-vitamin C inikezela ukuqhutyelwa kweeseli ezimhlophe zegazi ezivela kwezinye iindawo zomzimba entliziyweni, ngaloo ndlela ziququzelela ukubuyiswa kwamaseli enhliziyo echaphazelekayo. Kukho ubudlelwane obuphambene phakathi kwe-AD kunye ne-ascorbic acid. Oko kukuthi, ngaphantsi komzimba-ophakamileyo uxinzelelo.
I-Vitamin C ibalulekile kubantu abahluphekileyo. Ukongeza, ngokudibanisa ne-vitamin B1 kunye ne-amino acid cysteine, iziphumo eziyingozi ze-formalin, i-formaldehyde kunye ne-acetaldehyde inokuthintelwa.
I-Vitamin C iyakwazi ukumelana neenkqubo ezininzi ezinobuthi emzimbeni. Ngokomzekelo, umsi wecuba, i-nicotine, ukukhutshwa kwezimoto, isinyithi esinzima ... Njengoko sifundekile kulo mpilo kubomi bethu bemihla ngemihla, kubalulekile ukuthatha i-vitamin C.. Izifundo zibonisa ukuba egazini lababheki nabaninzi abaphakathi kwama-20 ukuya kuma-40 Iipesenti ezingaphantsi kwe-vitamin C. Isizathu kukuba i-vitamin isoloko ichithelwa ukulwa neempembelelo ezinobundlobongela. Ukuba awuzaliseli izinga layo yonke imihla kwimilinganiselo efanelekileyo, kunokukhokelela kumonakalo ongafanelanga kumzimba.
Kuza kubekho namhlanje, azikho iimeko ezithe zaziwa ngokuba yi-vitamin C. Kodwa ukuthatha iindleko ezinkulu kunokubangela iingxaki ngesisu, ngokukodwa nge-gastritis kunye nezilonda. Kwiimeko ezinjalo kucetyiswa ukuthatha iVithamini C emva koko kunye nokunciphisa amanani.
Ukukhusela, idosi ekhuthazwayo malunga ne-3 g ngosuku. Kodwa kubalulekile ukwazi ukuba le dose kufuneka inikwe ngokuqhubekayo kwaye ngokuqhubekayo. Ukuthatha ixabiso elikhulu levithamini C kunokukhokelela kwisisu. Kuyafana nokuphela kokukhawuleza kokungena kwakhe. Emva kwamanani aphakamileyo, kubalulekile ukuba uhlalutye ngokunyanisekileyo kwaye unciphise ngokunyanisekileyo ukungena kwe-vithamini, ukuze ungadangali kwifuthe elibi kumzimba we-vitamin C.
Ukuthatha i-vitamin C, kunokucetyiswa ukuba udibanise kunye ne-bioflavonoids, kuba kukho isizathu sokukholelwa ukuba ngoko i-vitamin ibanjwe ngcono ngomzimba. Kwaye ekugqibeleni kuyinqabileyo ukuthobela ingqalelo into encinci eyaziwayo: i-vitamin C inokukwazi ukukhupha lula. Oku kuthetha ukuba ukuba ungasayi kunxila amanzi kunye nebhetri ye-vitamin C eguqulwayo kuyo, kungcono ukuwuthululela. Ukuba awuyidli i-apula ngokuyihlaba kwaye uyibuyisele kwakhona kwiiyure ezimbalwa - uyilahle. I-vitamin C e-oxidized ibe yinto enobungozi kakhulu eyonakalisa umzimba ngokukhawuleza kwaye ixesha elide kakhulu.
Amachiza - Ukulimaza okanye ukuzuza
Ukusetyenziswa kwee-anyanisi zonyango lomhlaza
Ukucocwa - uncedo kwisilwanyana
Ukutya okunomdla kwimini engama-30
I-gloss yeenwele: iintlobo, isitshixo senkqubo, ukungafani nokuqhekeza
Indlela yokusebenzisa i-mica ngezipikili?
I-Potato casserole eneergetgettes
Jam kwi-raspberry "Pyatiminutka" - zokupheka ngeyiteyathelo kunye nesithombe